Zimbabwe: Mnangawa asks court to disregard opposition’s election petition. – ANTtention Media Fresh Your SEO optimized title
Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa has filed submissions in the country’s Constitutional Court opposing a challenge to his victory by main opposition leader Nelson Chamisa, Mnangagwa’s lawyers said .
Chamisa said the July 30 vote was tampered with and he challenged the result which gave Mnangagwa 2.46 million votes against 2.15 million votes for him.
Chamisa is challenging the ZEC that announced the presidential election results that indicate that President Mnangagwa won the elections with 50.8% of the votes cast, against Chamisa’s 44.3%.
Among other things, Chamisa questioned the announcement of presidential election results by commissioners other than the ZEC chair.
The court must rule within 14 days of an election challenge being lodged.
Related Topics:africa electionCourtemmerson mnagagwaNelson ChamisaZimbabwe
Nigeria: SERAP sues NYSC boss over Adeosun’s exemption certificate